बेशीसहरलाई देशकै नमुना नगरपालिका बनाउने योजना म संग छ – बृषराज गुरुङ-Nznepal.com
बेशीसहरलाई देशकै नमुना नगरपालिका बनाउने योजना म संग छ – बृषराज गुरुङ
देश चुनाबमय बन्दै छ। सबैको चासो कुन पार्टीले कसलाई उम्बेदवार बनाउला र कसले जित्ला भन्नेमा केन्द्रित भएको छ्। काँग्रेशको किल्ला भनेर चिनिएको लम्जुंगमा पनि चुनाबी चहलपहल बढेर गएको छ। बिगतमा घातअन्तरघातका कारण र राम्रो उम्बेदवार छनोट हुन् नसक्दा हार बेहोरेको तितो अनुभाब पनि काँग्रेसीहरुसंग छ. यो स्थानीय तहको चुनाबमा नगरपालिका र गाउपालिकाहरुमा काँग्रेसलाई उम्बेदवार छनोट गर्नु सजिलो चै पक्कै छैन तर आम नागरिक र काँग्रेसप्रति आस्था राख्नेहरुको आशा भने युवा पुस्ता तेस्मा पनि लम्जुंग बुझेको मान्छे ले जितोस र बिकाश तिर जिल्ला लम्कियोस भन्ने छ। एनजेडनेपालले निरन्तर चुनाबी अप्डेट लिएर आउने जमर्को गरेको छ. सबै इच्छुक उम्बेदवारहरुसंग अन्तरबार्ता लिने क्रममा आज लम्जुंगसम्बाददाता हरिश शर्माले बृषराज गुरुङसंग गर्नु भएको कुराकानीको केहि अंश ….
१) बृषराज जी आजकल के मा ब्यस्त हुनु हुन्छ?
–	म अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी छ्नौटको तयारी गर्ने, निर्वाचन रणनीति र कर्याकर्ता परिचालन गरी जिल्लाभर नेपाली कांग्रेसलाई जिताउने अभियानमा ब्यस्त छु।
२) जिल्ल्ला मा नेपाली कांग्रेसको अबस्था कस्तो छ?
–	जिल्लाका स्थानीय तहहरु गाउँपालिका र नगरपालिका लगायत जिल्ला समन्वय समितिमा हुने सम्पूर्ण निर्वाचनका नतिजाहरु निःसन्देहरुपमा नेपाली काँग्रेसकै पक्षमा आउने निश्चित छ ।
३) नेपाली कांग्रेसका जिल्लास्तर का कार्यकर्ताको भावना कस्तो पाउनु भएको छ?
–	उहाँहरु असाध्यै उत्साहित हुनुहुन्छ । निर्वाचनको माहोल खडा भैसकेको अवस्थामा आफ्ना आफ्ना ऊर्जाहरु निकालेर रणनीतिक ढङ्गले सबै साथीहरु लागि पर्नु भएको छ । जिल्ला तथा क्षेत्रीयतहको नेतृत्वमा पनि कार्यकर्ता साथीहरुलाई ऊर्जावान् र क्रियाशील बनाउन लागि परेको छ ।
४) तपाई पनि बेसीशहर नगरपालिकाको मेयरको आकांक्षी रे हो?
–	मैले आफ्नो उम्मेदवारी नगरसमितिमा पेस गरेको छु, अहिले छ्नौट प्रक्रियामा छ, टिकट पाउनेमा ढुक्क छु।
५) जित्ने आधार के?
–	कार्यकर्ताहरुको लगनशीलता, ऊर्जा र उत्साह एवम् अग्रजहरुको आशीर्वादका साथसाथै नेपाली काँग्रेसले अगाडि सारेका नीति, विचार तथा सिद्धान्तहरु मुख्य आधार हुन् । युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम, उद्दमीलाइ लगानी सुरक्षाको प्रत्याभुती , बिपन्नहरुलाइ गरिखाने अवशर दिलाउनु , जेष्ठ नागरिकको सम्मान सहितको सामाजिक सुरक्षा , महिला स्वरोजगार, कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक आधुनिकीकरण , ग्रामीण पर्यटनको बिकास , खेलकुद क्षेत्रको बिकास , लगानी मैत्री उर्जा क्षेत्र , सीप र दक्षतामा आधारित शिक्षण शंस्था, नगर क्षेत्र भित्रका धार्मिक स्थलहरुको प्रचार प्रसार जस्ता कार्यक्रम र यसका अलावा जिल्ला, क्षेत्रीय तथा नगरस्तरीय केही व्यवहारिक योजनाका कुराहरू पनि नेपाली काँग्रेसले जित्ने आधार हो । अग्रजहरुको सैद्धान्तिक लगानी र युवाहरुको वैचारिक बल पनि नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन जित्ने अर्को एक महत्वपूर्ण आधार हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त राजनीतिको सङ्गीन मोडमा नेपाली नागरिकले सँधै नेपाली काँग्रेसलाई राजनीतिमा नेतृत्वको अभिभारा दिएको छ यसपटक पनि त्यही नै हुन्छ ।
६) तपाईले म मेयर भए भने यो यो गर्छु भनेर भन्ने योजना कोर्नु भएको छ?
छ ,म संबृद्द बेसीशहर, उत्र्कृष्ट नगरपालिका र मोडेल भिलेज , स्मार्ट सिटि बनाउछु।
साथै नेपाली काँग्रेसले अख्तियार गरेको सिद्धान्त, अङ्गीकार गरेको विचार तथा नीति र लक्षित गरेको कार्यक्रम नै स्थानीय विकासका आधारहरु हुन् । त्यसैका आधारमा केन्दींय देखि स्थानीय तहसम्मका योजनाहरु तर्जुमा हुन्छन् । नेपाली काँग्रेसका हरेक उम्मेदवारहरुले नेपाली काँग्रेसको त्यही फ्रेमवर्कभित्र रहेर आफ्ना योजनाहरु तर्जुमा गर्छन्, मेरो हकमा पनि त्यस्तै हुनेछ, योजना कोर्नु वा तर्जुमा गर्नु भनेको प्राविधिक कुरा हो सबै भन्दा पहिले आवश्यकता पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने काम हुन्छ ।
७) जनजाती को भोट तपाई लाई आउने कुरा नकार्न सकिन्न तर प्रतिस्पर्धी दल र म मा यो फरक छः भनेर बुदागत रूपमा भन्न सक्नु हुन्छ?
-मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि सिङ्गो पार्टीगत कुरा हो तपाइँले सोधेको जिज्ञासा । जहाँसम्म समुदायको मतको कुरा गर्नु भएको छ । स्थानीयस्तरमा केही यस्ता मतहरू हुन्छन् । जुन राजनैतिक सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि विभिन्न पक्षले नजिक हुन्छन् । यो कुरा सबैमा लागू हुन्छ ।
जहाँसम्म प्रतिस्पर्धी दलको र हाम्रो कुरा छ व्यक्तिगत रुपमा म र मेरो क्रियाशीलता र व्यक्तित्वले फरक प्रभाव पार्ला नै तैपनि दलीय नीति, विचार, सिद्धान्त, आदर्श र कार्यक्रमहरु नै प्रधान हुन् ।
८) आज को लमजुंग संबृद्ध लमजुंग बनाऊंन के के छन तपाईसंग योजना?
–	म लमजुङको कुना कुना र बस्तीबस्तीमा पुगेको मात्रै होइन, बसेको छु । हरेक समुदाय र भौगोलिक क्षेत्र एवम् लिङ्गका बालबालिका, युवादेखि जेष्ठ नागरिकसम्मका वास्तविक कुराहरु बुझेको छु । यो काम गर्ने बेला हो सपना बाँड्ने बेला होइन । मैले बुझेको यत्ति हो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म जिल्लाको विकासको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गरेको छ अब पनि यही हुनेछ । पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक सम्पदाहरुको प्रबर्द्धन गर्दै सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक त्रिपक्षीय विकासमा लगानी गर्दै समृद्द लमजुङ बनाउने कुरामा हामी लाग्ने छौं ।
९) अरु र तपाईमा फरक के र तपाई लाई नै किन जिताउने?
-मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, यो चुनावमा म उम्मेदवार भएँ भने मेरो प्रतिनिधित्व नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्राविधिक पक्षबाट मैले नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गरेको हुनेछु । ब्यक्तिगत र सामाजिक संजाल मार्फत सम्पर्कमा आउनु भएका मेरा मित्रहरु संसारभर छरिएर रहनु भएको छ। ति देशहरुका सिटी काउन्सिलहरुका बारे अध्ययान गरेर र भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरेर राम्रा कुराहरु यता पनि लागु गर्ने छु। आफू एक जागरुक र ऊर्जाशील युवा भएका नाताले पनि मसँग पक्कै पनि वैचारिक र कार्यगत उत्साह र उमङ्ग छ । नेपाली काँग्रेसको सिङ्गो नीति तथा कार्यक्रमका अलावा मसँग केही नवीनतम् सोचहरु छन् ति सोचहरुलाई मैले नागरिकका प्रति दिइएको ऐतिहासिक र युगीन कार्यभार तथा जिम्मेवारीका रुपमा लिई काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु । यिनै हुन दलीय पक्षले नेपाली काँग्रेसलाई जिताउने कारण र त्यसको एक प्रतिबद्ध सिपाही भएका हिसावले मलाई अगाडि बढाउने कुराहरु ।
१०) अन्त्यमा केहि भन्नु छ?
मैले बेसीशहरको बास्तबिकता बुझेको छु सम्भावना भएका बिबिध पक्षको अध्ययन गरि दिगो बिकासको अबधारणा बमोजिम बिकास निर्माण र आर्थिक रूपमा समानता र समता मुलुक समाज निर्माण मेरो प्रथमिकता हो यसैको आधारमा नेपाली कांग्रेसको बिजय सुनिस्चित हुनेछ। तपाईले रुखमा खसालेको भोट खेरा जाने छैन.
यो अवशर दिनु भएकोमा धन्यवाद …….जयनेपाल!
उम्बेदवारी दर्ता गराएका मध्ये तपाईको रोजाईको ?? ल भोटिंग पनि गर्नु होला ….
बेशीसहरको मेयर बन्न लायक को होला ?
श्री कान्त घिमिरे
कृष्ण बहादूर अधिकारी
काठमाडौं उपत्यकामा नेपाली सेना, पुलिस र सशस्त्रका नि:शुल्क बस सेवा सुरु
भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा. पौडेल नियुक्त
टोखा नगरपालिकाका प्रमुख अधिकृत १ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ
नेपाली कांग्रेसका नेता बास्तोलाको पार्थिव शरीर सानेपामा, आजै दाहसंस्कार
प्रथम दोर्दी गाउँपालिका स्तरिय महिला तथा पुरुष खुल्ला फुटबल प्रतियोगीता सुरु
जन्मदिनको अवसरमा प्रवासबाट उपहार
समृद्ध मुलुक निर्माणको पहिलो आधार शान्तिसुरक्षा – प्रधानमन्त्री ओली
संगठनभित्र बसेर गलत काम गर्नेलाई छोड्दिन् – महानिरीक्षक
बडा दसैं: नवरात्रको पहिलो दिन आज घटस्थापना